Nandritra ny fisamboran’ny zandary azy…: voatifitra ary maty tany amin’ny hopitaly i Del Kely | NewsMada
Par Taratra sur 14/05/2021
Rakotoarivelo Fanomezantsoa Atlas ny tena anarany. I Del Kely kosa ny anaram-bositra nampalaza azy. Voatifitry ny zandary teo amin’ny feny, tao Ambohibolakely, kaominina Morarano Gara, omaly maraina ary maty ny harivan’io, tao amin’ny hopitaly Moramanga noho ny ratra mafy nahazo azy, ity jiolahy raindahiny amin’ny ”Raharaha kidnapping” ity.
Roa andro taorian’ny fanambaran’ny zandary, voasambotra, omaly maraina tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany tao Ambohibolakely, kaominina Morarano Gara, distrikan’i Moramanga, Rakotoarivelo Fanomezantsoa Atlas na i Del Kely. Jiolahy malaza mpampihorohoro ao amin’ny faritra Betsiboka sy Analamanga ary Alaotra-Mangoro izy. Efa telo taona latsaka teo ho eo izao ny nanaovana hazalambo azy vao izao voasambotra izao.
Voatifitra teo amin’ny feny havia teo am-pisamborana azy ity jiolahy ity. Nentina notsaboina tao amin’ny hopitaly Moramanga ny tenany sady hoe hanaovana andrimaso hentitra. Kanjo, araka ny vaovao azo farany, namoy ny ainy, noho ny ratra nahazo azy, ny lehilahy.
Raha ny fanambarana, ireo zandary mampandry tany nanao hazalambo azy hatrany Anjozorobe ny nahasarona ny lehilahy, hetsika notarihin’ny jeneraly Rakotondrazaka Andry, kaomandin’ny fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto Analamanga. Hatramin’izao, mbola mitohy ny hazalambo ireo namany. Mbola mipetraka ihany koa ny fanamby nambara fa tsy maintsy tratra ireo olon-dratsy mpiara-dia aminy. Tsy maintsy milamina ihany koa ireo faritra nampihorohoroan’izy ireo.
Voatonona tao anatin’ireo asan-jiolahy maro isan-karazany i Del Kely, indrindra fa ireo karazana fakana an-keriny mavaivay teto amin’ny manodidina ny faritra Analamanga. Anenjehana azy ny raharaha vono olona, ny fakana an-keriny, ny asan-jiolahy mitam-basy. Ao anatin’izany ny fanolanana, ny kolikoly, ny fampihorohoroana, ny halatra omby sy ny fampiasana taratasy hosoka. Mbola anenjehana ity jiolahy ity ihany koa ny fitazonana sy ny fampiasana tsy nahazoana alalana fitaovam-piadiana sy ny maro hafa koa.
Tsiahivina fa ny volana aogositra 2019 no hita ny kara-panondron’i Del Kely. Fantatra nanomboka teo ny mombamomba azy.
Maro ireo namany efa lavo
Tsy vitsy ireo ekipan’i Del Kely efa voasambotry ny mpitandro filaminana. Isan’izany i Mita sy i Honoré ary i Rivo, voasambotra ny alahady lasa teo tao Ambohimiandra, kaominina Morafenoboana, distrikan’i Maevatanàna. Tratran’ny miaramilan’ny ZDS Ankarafantsika ireo jiolahy. Mbola tratra niaraka amin’izy ireo ihany koa ny mpimasy nitondra basim-borona miisa roa. Tsy mijanona hatreo fa mbola mitohy ny fikarohana ireo ekipan’i Del Kely hafa. Maro ihany koa ireo mpiara-dia aminy efa lavon’ny mpitandro filaminana. Eo koa ireo mpimasy sy ny jiolahy hafa voatonona ho namany efa migadra.
Araka ny teny fampanantenana avy amin’ny fitondram-panjakana tarihin’ny filoham-pirenena Rajoelina Andry Nirina, hatolotra ireo zandary sy ireo nahazoam-baovao nahatrarana azy ny lelavola fankasitrahana mitentina 20 000 000 Ariary.
Toraka izany ihany koa ny jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg), nanolotra ny lelavola 2 000 000 Ariary ho an’ireo maherifo ireo.
Ankoatra ireo lelavola fankasitrahana ireo, homena fankasitrahana amin’ny asa ihany koa ireo zandary: ny « primes de bravoure » sy ny « bonus d’ancienneté en port de grade » ary ny “lettre de félicitation”.